चलचित्र ‘नागरिक’ शुक्रबारदेखि प्रदर्शन हुने
काठमाडौँ, १६ कात्तिक । समकालीन राजनीतिक कथावस्तु समेटिएको नेपाली कथानक चलचित्र ‘नागरिक’ आगामी शुक्रबारदेखि देशभर प्रदर्शनमा आउने भएको छ । विसं २००७ देखि वर्तमान राजनीतिक गतिविधिलाई चलचित्रले समेटेको छ । चलचित्रले नेताहरुले कसरी राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्न जनतामाझ गरिएका वाचालाई बिर्सिएर आफ्ना स्वार्थ पूरा गर्न उन्मूख हुन्छन् भन्ने कुरालाई दर्शकमाझ ल्याउन खोजेको छ । चलचित्रको मुख्य भूमिका देखिएका अभिनेता रमेश बुढाथोकीले राजनीतिमा केकस्ता फोहोरी खेलहरु हुन्छन् र नेताले कसरी जनतालाई झुट बोल्छन् भन्ने कुरालाई देखाउन खोजेको जानकारी गराउनुभयो...
'कबड्डी कबड्डी' को प्रोमो सार्वजनिक
काठमाडौं – निर्देशक रामबाबु गुरुङको 'कबड्डी' को सिक्वेल 'कबड्डी कबड्डी' को प्रोमो सार्वजनिक भएको छ। सोमबार राजधानीको मण्डला थिएटरमा आयोजित कार्यक्रममा 'कबड्डी कबड्डी' फिल्मको प्रोमो सार्वजनिक गरेका छन्। 'यसअघिको 'कबड्डी' भन्दा 'कबड्डी कबड्डी'ले दर्शकलाई मनोरञ्जन दिनेमा आशावादी छु,'निर्माता निश्चल बस्नेतले भने। निर्देशक रामबाबु गुरुङले निर्देशन गरिरहेको रोमान्टिक कमेडी 'कबड्डी कबड्डी' मा राजनीतिक पृष्ठभूमिमा थपिएको छ। फिल्मलाई निर्देशक गुरुङ र कवि उपेन्द्र सुब्बाले संयुक्त रुपमा लेखेका हुन्। २५ दिने फिल्मको सुटिङ राजधानी र मुस्ताङमा...
बिवाह अगाडीनै गर्भवति थिए यी बलिउड सुन्दरीहरु
बिवाह अगाडीनै गर्भवति थिए यी बलिउड सुन्दरीहरु ...
Hate story3४ दिसेम्बरमा रिलिज हुने पक्का
फिल्म हेट स्टोरी ३ को रिलिज डेट तय भएको छ फिल्म ४ दिसेम्बर २०१५ मा रिलिज हुने पक्का भएको ५। यस फिल्मको मुख्य भुमिकामा करण ग्रोवर, डेजी शाह, जरिन खान र स्रवन जोशी देखिने भएका छन्। फिल्म हेट स्टोरी र हेट स्टोरी २ पनि हिट भएको हुनाले निर्माताहरुको भनाइमा यो फिल्म पनि हिट हुने र ह्याट्रिक हुने भनाइ छ। बदलाको आगो र राम्रो गितहरुको संगम यो फिल्ममा देख्न सकिने छ।यो पहिलो फिल्म हुने छ जहाँ स्रवन छुट्टै रुपमा देखिने भएका छन्। ...
१० लाख खर्च गरेर घटाइन परिणीती ले १० किलो बजन
बलिउड अभिनेत्री परिणीती चोपडा आफुलाई फिट राख्नको लागी कडा मेहेनत गर्नुको साथै धेरै रकम पनि खर्च गरिरहेकी छिन्।खबर अनुसार परिणीतीले १५ दिन देखि १ महिना भित्र बजन घटाउनकोलागी १० लाख रुपैया खर्च गरेकी छिन्। हुनत परिणीति आफ्नो बजनलाई लिएर धेरै जसो चर्चामा रहने गर्दछिन्। यसको साथै श्रद्धा कपुर र आलिया भने आफ्नो फिटनेसलाई लिएर चर्चामा रहने गर्दछिन्। धेरै पटक आलिया र श्रद्धा बाट परिणीती पछाडी पर्नु परेको पनि छ। त्यसकारण परिणीती ले आफ्नो बजन घटाउन सुरु गरेकी छिन्। परिणीतीले आफ्नो बजन घटाउन डिटाँक्स नामको पद्धतीको साहारा लिएकी हुन। सुन्नमा आएको छ कि परिणीतीले...
फिल्म बागीको फस्ट लुक रिव्यु टाइगर श्रोफ सँग क्युट श्रद्धा
श्रद्धा कपुर र टाइगर स्रोफको फील्म बागीको फस्ट लुक रिव्यु भएको छ।फिल्मको फस्ट लुकलाई देखेर दर्शकहरुको फिल्म प्रति चाह एकदमै बढेको देखिन्छ। फस्ट लुकमा टाइगर श्रोफ र श्रद्धा कपुरको जोडी एकदमै क्युट देखिएको छ। वहि पोस्टरलाई देखेर अरु कुराहरु पनि अगाडी आइरहेको छ। ...
जब अभिनेत्रीको भुतले गरिन KISS
न्‍युयोर्क के तपाइले भुतको बारेमा सुन्नु भएको छ या भुतलाई महसुस गर्नु भएको छ त? धेरै यस्तो कुराहरु पहिला सुनिन्थ्यो जुन अहिले पनि सुनिन्छ। अहिले सम्म हामीले यो कुरा किताबमा पढेका छौ या त फिल्ममा देखका छौ तर लाग्दछ कि भुत को उपस्थिती साँच्चीनै हुने गर्दछ। यो कुरा हामी भनिरहेका छैनौ बल्की एक बलिउड अभिनेत्रीको भुतको दावा छ। उनको भनाइ छ कि उनले महान अभिनेत्रीयो मा सामिल एलिजाबेथ को भुत मात्र देखेनन् कि भुत लाई अंगालो हालेर किस पनि गरेका थिए।यस्तो दावा गर्ने व्यक्ती मिकी वरमूच (63) हुन उनको भुतिया शो "माई बिग फैट गिप्सी साइक" को शुटिङको क्रममा उनले एलिजाबेथको भुत...
भाद्र १९, २०७२- कंगना रनावत पछिल्ला दिनमा समाचारमा छाएको छायै छिन् । बलिउड फिल्म उद्योगका धेरै जनासँग नाम जोडिएको क्वीन एक्टरको रिलेसनमा धेरै उतारचढावहरु आए । भर्खरै मात्र भारतको एक म्यागेजिनलाई अन्तर्वार्ता दिने क्रममा कंगनाले भनेकी छिन् कि उनी खराब गर्लफ्रेन्ड हुन् । ‘म खराब प्रेमी हुँ । धेरैथरीका मानिसहरुले मलाई मेरो बारेमा यही टिप्पणी गरेका छन् । किन हो मलाई थाहा छैन’, उनले भनेकी छिन्,‘म चाहेको कुरा भनिहाल्छु सायद यही कुरा अरुले सहन सक्दैनन् । तर म यसैमा खुशी छु ।’ उनले आफूले धेरै जना कलाकारसँग अफेयर चलाएको आरोपको भने खण्डन गरिन । भन्छिन्,‘धेरै...
सनि लियोनीको विवाहमा नाच्ने भएका छन् रणविर र अनुष्का
सनि लियोनी बन्ने भएकी बेहुली र बिवाहका नाच्ने भएका छन् रणविर कपुर र अनुष्का । एक मिनेट यो रियल लाइफ मा हैन रिल लाइफमा हुने भएको छ। अब बन्न लागेको करण जोहरको फिल्म ए दिल हे मुश्किलमा देखिने भएका छिन्। फिल्ममा जुडेको जानकारी अनुसार फिल्ममा यो सँग सिक्वेंस हुनेछ जसमा रणविर र अनुष्का नाँच्ने भएका छन्। खास कुरा यो पनि हो कि यो गितमा यि तिन सिताराहरुले मनिष मलहोत्रा डिजाइनको ड्रेस लगाउनेछन्। हालकी फिल्ममा एश्वर्या राय बच्चन देखिने छैनन् जो फिल्मको मेन हिरोइन हुनेछिन्। खैर यो कुरावाट अवश्य पनि सबै फ्यानहरु खुसी हुनुहोला सनि लियोनीको विवाह त्यो पनि करण जोहर स्टाइलमा । ...
१ करोड पटक हेरियो सलमानको यो गित
बलिउड अभिनेता सलमान खानले फेरि नया एक्टरहरुलाई लन्च गर्दैछन् तर यो पटक भने यि एक्टरहरुको अभिभावक हुन् सलमानको प्रोडक्शन हाउसमा बन्न लागेको फील्म हिरो मा सुनिल शेट्टिको छोरी आथिया र आदित्य पञ्चलिको छोरा सुर पञ्चलीले देखिने भएका छन्। यो फिल्म सँग जोडिएको एउटा महत्वपुर्ण कुरा के हो भने सलमानले यो फील्मको टाइटल सङ्ग मे हुँ हिरो तेरा भन्ने गित गाएका छन् जुन यति हिट भएको छ कि यसलाई १ करोड पटक हेरिएको छ। यो कुराको जानकारी स्वयम यो फिल्मको हिरो सुरज पञ्चलीले दिएका हुन्।उनले लेखेका छन् द मिलिनियम ब्लुज तपाईहरु सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद सबैलाई माया पनि साथमा...
म प्राध्यापक पनि हुँ
स्ट्याण्डअप कमेडी मार्फत दर्शकको मन जित्न सफल कलाकार तथा टेलिभिजन प्रस्तोता हुन्— सन्दीप क्षेत्री । वीरगन्जमा जन्मिएपछि प्राथमिक तहसम्मको अध्ययन दाङमा पूरा गरेका सन्दीप बाल्यकालदेखि नै चलचित्रका पारखी थिए । बुवासँग हलमै पुगेर चलचित्र हेर्न रुचाउने सन्दीप क्रिकेटका राम्रा खेलाडीसमेत हुन् । वीरगन्जमा छँदा वीरगन्ज युवा क्लबका लागि ब्याट्सम्यान तथा बलरका रूपमा खेलिसकेका सन्दीपले टिम कान्तिपुरबाट मिडिया कपसमेत खेलिसकेका छन् । रेडियो सिटी एफएममा आरजेका रूपमा छ वर्ष काम गरेपछि नेसनल टेलिभिजनमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न थालेका सन्दीपले टिटिभीबाट प्रसारण...
ह्याक भयो बिग बि अमिताभ बच्चनको ट्वीटर अकाउन्ट
बलिउड अभिनेता अमिताभ बच्चनको ट्वीटर अकाउन्ट ह्याक भएको छ।उनले आफै ट्वीट गरेर यो कुराको जानकारी दिएका हुन र उनले भने उनको पेजमा सेक्स साईट्सको लिङक हरु शेयर भईरहेको छ। साथै उनले ह्याकरलाई पनि यस्तो नगर्नको लागी अवगत गराएका छन्। बिग बि ले ट्वीट गरेका छन् 'मेरो ट्वीटर अकाउन्ट ह्याक भएको छ।यसमा सेक्स साईट्सको फलो गर्ने लिङक हरु शेयर भइरहेको छ।यो जसले पनि गरिरहेको हो कोहि अरु सँग गर्नु मलाई यसको जरुरत छैन।' यो भन्दा अगाडी मनिषा कोइरालाको पनि ट्वीटर अकाउन्ट ह्याक भएको थियो। यहि केहि दिन अगाडी संसारको सबै भन्दा शक्तीशाली आतंकी संगठन आइएस ले अमेरिकाको...
Thank you भन्ने तरिका यस्तो छ सलमानको दिए कबिर खानलाई यो खास उपहार
मुम्बई बक्स अफिसमा फिल्म बजरंगी भाईजान भएको १ महिना पछि पनि फिल्मको चमक उस्तै नै छ। त्यहि फिल्मको निर्देशक कबिर खानलाई सलमानले एउटा खास उपहार दिएका छन्। सलमानले निर्देशकलाई आफ्नो चर्चित महिला र पुरुषको ब्यालक एण्ड ह्वाइट पेन्टिङ उपहार स्वरुप दिएका छन्।सलमानको यो पेन्टिङमा पुरुष र महिला बिचको माया देखाइएको छ यसमा महिलाको निधारमा रातो रंगको टिका छ। कबिरले यसको लागी सलमानलाई ट्विट गरेर धन्यवाद भनेका छन् उनले ट्विट गरेका छन्। Just got the best gift... From my producer, my actor, my friend pic.twitter.com — Kabir Khan (@kabirkhankk) August 29, 2015 सलमालने पनि बजरंगी भाईजानको सफलताको लागी कबिरलाई धन्यवाद स्वरुप यो...
एउटा सिनको कारण इन्डियामा बन्ने भएको रियालिटी शो किसिङ कन्टेस्ट जसका लागी कंगना र इमरानले गरे २४ घण्टा अभ्यास
कंगना र इमरान द्धरा अभिनित चलचित्र कट्टि बट्टि को गाना लिप टु लिप रिलिज भएको छ र यो गितको लागी यो दुई एक्टर हरुले २४ घण्टा अभ्यास गरेका छन्।यिनिहरुको किसिङ लाई लिएर यति चर्चा भएको छ कि यि दुवै अब एउटा किसिङ कन्टेस्ट जज गर्दै छन्। भारतमा यस्तो कन्टेस्ट पहिलो चोटी हुदै छ। कंगना र इमरान यो कन्टेस्ट जज गर्न एकदमै उत्साहित छन्। कन्टेस्टको सुरुवात मुम्बईबाट हुनेछ यसमा ५० जोडीले भाग लिने छन्। यसमा राम्रो पर्दशन गर्ने जोडीलाई यो जोडी बाट पुरस्कार दिइने छ अब तपाई हरु हेर्नुहोस कस्तो कस्तो जोडीले भाग लिने छन भनेर। ...
अक्षय कुमार र रणबीरको फिल्ममा सनी लियोन
मुम्बई–बलिउडकी बेबी डल सनी लियोन खेलाडी अक्षयकुमार र रकस्टार रणबीर कपुरको फिल्ममा छोटो भूमिकामा देखिने भएकी छिन्। २०१२मा प्रदर्शन भएको फिल्म जिस्म–२ बाट आफ्नो बलिउड यात्रा सुरु गरेकी सनीले विस्तारै आफ्नो पहिचान बनाएकी छिन्। यो वर्षमात्र सनीको दुई वटा फिल्म रिलिज भएका छन्। 'एक पहेली लीला र 'कुछ कुछ लोचा है' प्रदर्शन भइरहेका छन भने तेस्रो फिल्म पनि प्रदर्शनको तयारीमा रहेको भारतीय संचारमाध्यमले उल्लेख गरेका छन् । संचारमाध्यममा अनुसार सनी अक्षय कुमारको फिल्म 'सिंह इज ब्लिंग'मा क्यामयिो भूमिकामा देखिने भएकी छिन्। यसअघि संजय गुप्ताको फिल्म 'शूट आउट...